Kwakunzima babekezela manje sebevelele emikhakheni ehlukene | Isolezwe
Kwakunzima babekezela manje sebevelele emikhakheni ehlukene
intandokazi / 14 March 2019, 11:02am / NONTUTHUKO NGUBANE
USIMIDELE Adeagbo waseNigeria
IZIMO ezinzima ababhekana nazo empilweni abazange bazivumele ziphazamise amaphupho abo okuphumelela abesifazane abasemabhizinisini, abenza ezibukwayo kwezemidlalo nakweminye imikhakha abebekhuluma emcimbini weForbes Leading Women ngaphansi kwesihloko esithi: The Spotlight.
UNksz Kgothatso “KG” Montjane, wakuleli ukleliswe kubantu abangu-10 ezweni lonke abenza ezibukwayo kwi-wheelchair tennis. Waba owokuqala owesifazane omnyama ukuqhudelana nabanye abadlali eWimbledon. Uthe ukuze afike lapha kwakungelula neze njengoba wayengowesifazane okhulele emakhaya, okhubazekile futhi engazi nokuthi i-tennis idlalwa kanjani.
“Uma owesifazane wasemakhaya ethole umntwana okhubazekile uye amfihle ngoba kuba sengathi ihlazo futhi umntwana wakho engeke abe yilutho ezweni. Abazali bami benza okuhlukile, bangiyisa esikoleni bazama ukuthi ngibe nempilo. Kwakungelula nhlobo ezinye izingane zingafuni ukudlala nami ngoba nginokukhubazeka emlenzeni. Ngelinye ilanga uthisha wami wathi ngizomela isikole emdlalweni we-wheelchair tennis, ngangingazi nokuthi yini leyo ngoba ngangazi umdlalo webhola kuphela. Ngaya okokuqala ngaqokwa ukuba ngimele elakuleli, kumanje ngiqopha umlando,ngiyaqhubeka ngiyazimisela. Umdlalo onzima nobizayo lona njengoba kusagcwele abamhlophe bodwa, yize kunjalo ngiyaphumelela kuwo. Ungalilahli ithemba ngempilo,” kusho uNksz Montjane.
UNksz Linda Ikeji usomabhizinisi waseNigeria yena wake waboshwa ngoba ehluleka ukukhokha imali ayeyiboleke ebhange ngoba eqala ibhizinisi lakhe lephephabhuku.
Uthe ukulandwa amadoda ayehlome eyizingovolo kubo ezofuna imali yakhe kwameza wavuka emaqandeni.
“Kumanje nginenhlangano esiza abesifazane abancane abaqala amabhizisini kodwa bengenayo imali. Kunamantombazane angu-30 engiwaphe imali ukuze aphembe amabhizinisi abo, ngenxa yokubona ukuthi ngaxakeka kakhulu ngiqala. Ngazithembisa ukuthi akekho omunye owesifazane omncane okumele asokole njengami ngisaqala ibhizinisi. Engingakusho ukuthi uma unephupho lilelwe lelo phupho, ungayeki, ungapheli amandla. Yebo kunzima ukulandela iphupho kodwa akukho okungeke kwenzeke uma uzimisele. Imali engangiboshelwe yona ngihluleka ukuyikhokha manje sengithenga ngayo izicathulo,” kusho uNksz Ikeji ehleka egcwele izinyembezi emehlweni.
UNksz Simidele Adeagbo ongumdlali (Olympian) waseNigeria owaqopha umlando ngokuba owesifazane wase-Afrika nomnyama ukumela izwe lakhe emdlalweni wamaSport Skeleton, lapho usuke ushushuluza khona eqhweni elibandayo, uqhudelana nabanye. Uthe akuzange kube lula kodwa ukubekezela nokuzimesela ngayefuna ukukufeza ikhona okwenza waphumelela.
“Kukhona isikhathi lapho ngingazange ngiqokwe ukuba ngiyomela izwe lami, kwaqoka umngani wami. Ngangibona umngani wami ephila impilo yami, amaphupho enganginawo, uyena owayewaphila. Ngizikhumbula ngikhala ngizibuza ukuthi kungani mina ngingakwazi ukwenza ayekwenza, ngafikelwa umcabango wokuthi isikhathi sami siyeza. Ngasebenza kanzima nami ngagcina ngiqokiwe, amaphupho ami afezeka. Kudinga ukuba ubekezele noma kunzima uphikelele kulokho osuke ufuna ukukufeza, ungavinjwa yilutho. Noma abanye bekudlula endleleni wena phikelela ekuqedeni ibanga lakho,” kusho uNksz Adeagbo.
Laba besifazane bebeze bekhale izinyembezi uma bekhuluma ngobunzima abadlule kubo ukuze baphumelele. Ngazwi linye bonke bathe, ekugcineni awuzisoli ngokuphikelela ekufezeni amaphupho akho noma kunjani, noma kuthiwani.